Shan Arrimood Muslimku Ikhtiraaceen Waa Hore oo Hadda Wax ka Beddelay Dunida | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Shan Arrimood Muslimku Ikhtiraaceen Waa Hore oo Hadda Wax ka Beddelay Dunida
October 21, 2017 | Published by: Kayd
1. Kafeega ama bunka
Sida lagu ogaaday daraasado la sameeyey, in ka badan hal milyan koob oo kafee ah ayaa maalin kasta lagu quutaa adduunka guudkiisa, halka balaayiiin dad ah ka dhigteen inay si joogto ah u isticmalaan cabbitaanka bunka, balse dad aad u tiro yar ayaa ilaa hadda og in isticmaalka kafeegu asal ahaan uu ka yimi Muslimka.
Sida taariikhda lagu hayo sannadkii 1,400 kii waxa cabbista kafeegu aad caan uga noqday muslimjiintii Yemen ku dhaqnayd amma koonfurta Jasiiradda Carabta, laakiin dadka qaar waxay ku doodaan in asal ahaan Itoobiya ka yimi.
Sababta lagu ogadaay waxay ahayd nin dhalashadiisa lagu murmo inay Yemen iyo Itoobiya ahayd oo khubarada taariikhdu aanay isku raacsanayn uu ka war helay riyo uu lahaa oo inta ay cuneen midhaha kafeega ay noqdeen qaar aad u tamar badan oo firfircoon. Wixii intaa ka dambeyeey waxa midhahaas lagu darsan jiray biyo inta laga dhigo daqiiq, kadibna la cabi jiray, waana sidaas sida uu kafeegu ku soo baxay.
Marka laga yimaado dhacadada ninkaas xoola raacatada ah ee muranku ka jiro, haddana kafeega waxa laga helay dhulka joogiisu sarreyo ee Yemen, waqtigii boqortooyadii Cismaaniyiintu ka talinaysay dhulka Islaamka, gaar ahaan qarnigii 15aad, waxaannu cabitaanka kafeegu ku fiday guryaha caasimada waaweyn ee islaamka sida Qaahira, Istanbul, Dimishiq, Baqdaad.
Cabitaankan waxa uu aakhirkii gaadhay qaaradda Yurub oo ay geeyeen ganacsato, kaasoo ka mid noqday dhaqanka Yurub, meelaha kafeega lagu cabbaa waxa ay ka mid noqotay sannadkii 1600 kii goobaha ay ku kulmaan filosofarrada waaweyn, iyagoo ku falan qayn jiray arrimaha markaas ay maskaxdooda ka hindisaan, doorka dawladda iyo waliba arrimaha maamulka. Doodahan kafeega ka dhashay waxay keeneen kacaankii ikhtiraaca (The Enlightenment) amma mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii maskax-maalka ee dunida casriga ah.
Kafeega oo ka yimi xoolo-raacatada Yemen amma Itoobiya waxa uu u gudbay dunida casriga ah ee Yurub ka mid tahay, iyadoo wax ka badan hal milyan oo koob maalin kasta la cabbo.
Dugsiyada sare ee adduunku waxa aad ugu adag amma ay ardaydooda iyo macallimiintodu la dalai dhacayaan xisaabta Al Jebra, kuwaasoo aan jeclaysan, balse waxyaabo badan oo adduunka ah lagu qabto, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha Muslimku soo kordhiyeen ee dunida wax badan ka tartay, gaar ahaan waqtigan casriga ah.
Waxa ogaaday, dunida u soo saaray saynisyahankii iyo khabiirkii xisaabta ee Maxameed Ibn Musa Al Khawarizmi, kaasoo noola laga bilaabo 780 ilaa 850-kii kuna noola Beershiya iyo Ciraaq. Buuggiisa la yidhaa Al Kitab Al Mukhtasar Fi hisab Al Jabr Wa-l-Muqabala amma xallinta xisaabaadka iyo dheellitirkooda waxa uu ku sheegay amma uu ku dejiyey aasaaska mabaadii’da xisaabta Al Jebra. Erayga Al Jabr ee buugga magaciisa ka muuqda macnahiisu waxa weeyaan dhammaystir, taasoo u taagan kelmada Latiinka ah ee Algerbra.
Sidoo kale buugga Al Khawarizmi waxa uu ku sharraxay sida loo isticmalaayo is leegyada Al Jebra, gaar ahaan marka lagu xalilnayo xisabaadka dunida dhabta ah sida xisaabinta Sakada amma dhaxalka oo kale qaybintiisa.
Buuggaagta Al Khawarizimi uu qoray waxa loo turjumay Latin amma luqadda Yurub intii lagu jiray sannadihii 1,000-kii amma 1100kii.
Xalka Al Jebra ee soo saaray waxay faa’iido u noqotay injineernimada, mana suurtogali jirin in xalal loo helo haddii aan xisaabtaas amma mid u dhiganta la heli lahayn.
Shahaadada Digriga (Degree) ee jaamacadaha laga qaato
Marka laga hadlaayo Jaamacado waa arrin ay Muslimiintu muhindiseen amma dunida islaamka laga yaqaanay. Marka la eego taariikhda islaamka masaajidadu waxay ahaayeen goobo waxbarasho. Imaamada tujiya amma waqtiga saaladada dadka hoggaamiya waxay wax bari jireen arday ay u dhigi jireen cilmiga Islamka sida Quranka, fiqiga (Falsafada islamka) iyo xadiisyada. Waana halka ay tacliintu ka soo bilaabantay madarasidadu amma malmaacadu.
Jaamacadii ugu horraysay ee Karauine
Dugsigii amma Jaamacadii ugu horraysay ee caalamka laga aasaasay waxay ahayd al Karaouine oo dhidibada loo taagay sannadkii 859 taariikhda milaadiga oo ay furtay Fatima Al Fihri, gaar ahaan waxa laga furay degaanka Fes oo ku yaal dalka Marooko. Dugsigan haweenaydaas furtay wuxuu soo jiitay qaar ka mid ah culimadii hoggaaminaayey cilmiga waqooyiga Afrika, waxaana ka soo baxay araydii ugu qiimaha badnayd xagga aqoonta dhulkaas.
Ardayda ka soo baxday Jaamacadan amma dugsigan waxay ahaayeen qaar barta cilmiga diiniga iyo ka maadiga ahba. Marka waxbarashadu u dhammaato haddii macallimiintoodu u arkaan inay u qalmaan in shahaado la siiyo waxay siin jireen shahaado loo yaqaannay Ijaza, taasoo u taagnayd in ardaydu fahmeen casharadii la siinayey, waqtigana u qalmaan in ay macallimiin noqon karaan.
Arrintana waxay ku fiday dunida islaamka, kadib waxa sannadkii 970 magaalada Qaahira ee dalka Masar laga aasaasay Jaamacadda Al Azhar oo hadda ah mid caan ah, halka 100- Seljuks ay aasaaseen kumanaan madaaris ah oo Bariga Dhexe laga hirgeliyey, aakhirkiina shahaadada dikriiga ee Jaamacadu bixisa wuxuu ku fiday Yurub, iyadoo ay gaadhsiiyeen Muslimiintii Spain ku dhaqnayd, halkaas oo ardayda Yurub u dhalatay u safri jireen si ay waxbarasho uga soo qataan
Jaamacadda Bologna eek u taal Talyaaniga iyo Jaamacadda Oxford ee England waxa la kala aasaasay qarnigii 11aad iyo 12aad, waxaanay halkaas ka sii qaadeen shahaadii Muslimiinta ee dikriiga ahayd oo ay siin jireen ardayda u qalanta, aakhirkiina ay bilaabeen in qofka shahaado lagu siiyo si uu wax gaar ah takhasus ugu qaato.
Muusiga Baanbayda la yidhaa ee ciidammada Millaterigu Garacaan
Arday aad u tiro badan oo dugsiyada amma Jaamacada reer galbeedka ka soo baxa waxay aad u yaqanaan baanbayda amma turbaan kooxeedka, kaasoo ay garacaan koox boqolaal muusigiiste ah, sidaa darteed muusiga xilliyada ciyaaraha lagu jiro si dadka loogu madadaaliyo amma ciyaaryahannada taageero loogu muujiyo waa wax dunida meelo badan ka jira. Waqtigii la odhan jiray Budada Qoriga (Gunpowder age) ee reer Yurub waxay askartooda ku dhiirigelin jireen marka ay dagaalada ku jiraan durbaanka millateriga amma baanbayda hadda la yidhaa, laakiin asal ahaan dhaqankan wuxuu ka yimi boqortooyadii Cismaaniyiinta waqtigii 1300 aadkii, taasoo ka dhigtay ciidammadii boqortooyadan inay noqdaaan kuwa adduunka ugu awoodda badan.
Muusiga durbaanka ah ee ciidammadu waqtigaas tuman jireen waxay uga jeedeen in ay ku cabsigeliyaan cadawgooda amma ku dhiirigeliyeen ciidanka laf ahaantiisa, waxaana loo yaqaanay muusigan Meher Band, iyadoo kumanaan mayl laga soo maqli jiray.
Waqtigii Cismaaniyiintu qabsadeen dhulka Balkans loo yaqaan oo ku beegnayd qarnigii 14aad ilaa 16aad waxyaabaha ciidammada Cismaaniyiinta u fududeeyey in ay dagaalladooda ku guulaystaan waxa ka mid ahaa durbaankan.
Shirkaddo soo saara bilaayiin doollar ayaa lacagtooda ka hela sawira sida shirkadaha Istagram iyo Canon, kuwaasoo inta badan ganacsigoodu ku xidhan yahay in ay sawirro soo saraan, balse hawshan amma ganacsigan qabashadiisu waxay noqon lahayd mid aan waxba ka jirin haddi aan la heli lahayn Kamarada, taasoo qarnigii 11aad uu ikhtiraacay saynisyahan Muslim ah oo la yidhaa Ibn Al Haytham, kaasoo waliba dunida ku soo kordhiyey sida looga faa’iidaysan karo kamarada iyo laydhka.
Ibn Al Haytham oo ka shaqaynaayey boqortooyo Qaahira ka dhisnayd horraantii 1000aadkii, waxa uu ka mid ahaa saynisyahannadii waqtigaas loogu qadarinta badnaa. Si uu haddaba cilmigiisa u horrumariyo wuxuu soo saaray hab cilmiyeed ku salaysan sida cilmi-baadhista loo sameeyo, kadib markii xabsi guru ay ku xukuntay Fatimid oo ahayd maamulihii boqortooyadii Al Hakim.
Waxa uu waqtigaas awood u helay inuu baadhitaan ku sameeyo sida laydhku u shaqeeyo, gaar ahaan daraasadiisu waxay ku salaysnayd sida isha kamaradu u shaqayso. Ibn Al Haytham waxa uu noqday Saynisyahankii ugu horreeyey ee ogaad in marka god amma dalool yar lagu xidho seexarad yar oo laydhka aan sii daynayn in qalabka seexarada hor yaala uu ku sawir maayo gudaha marka fallaadhuhu ku dhacaan, taasina waxay dhaxal siisay inuu ikhtiraaco kamada, taasoo noqotay mid si sax ah u shaqaynaysa.
Ibn Al Haytham ikhtiraacidiisu waxay hormood ka noqotay kamaradahan casriga ah ee adduunka maanta jira, cilmi-baadhis la’aantiisuna maanta waxay meesha ka saari lahayn shirkaddo badan oo ku faana sawirrada iyo qalabka lagu qaadaba…
W/D: Ibraahim Khadar Siciid (ibraahimkhs@hotmail.com)